Dad lagu qab qabtay howlgal laga sameeyay Baladweyne | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Dad lagu qab qabtay howlgal laga sameeyay Baladweyne
Saacadihii la soo dhaafay ayaa Ciidamada Booliska Hir-Shabeelle waxaa ay howlgallao dad badan lagu qabqabtay ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,kaas oo amniga lagu xaqiijinayay.
Howlgalka ayaa Ciidamada waxaa ay ku baarayeen guryaha qaar ee Magalada Baladweyne iyo Gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida ay Warbaahinta u sheegeen Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Hiiraan ee Maamulka Hir-Shabelele.
Guddoomiye kuxigeenka dhinaca Siyaasadda iyo Maaliyadda Maamulka Gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay in Ciidamada ammaanka ay soo qabteen ku dhawaad 20 ruux oo lala xiriirinayo falal amni-darro,kuwaas oo badankood isticmaalayay waxyaabaha maanka-dooriya.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ciidamada Dowladda & kuwa Hir-Shabeelle ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegano u dhaxeeya Magaalooyinka Buulo-Burde & Jalalaqsi,isla markaana howlgalladaas lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay Mareykanka
Next articleCumar Filish oo shaaca ka qaaday Sababta loo sugi la yahay Amniga Muqdisho